Samukela ubusika 2016-2017 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sibamukela ubusika. Kufike emahoreni ambalwa edlule. Isikhathi sayo esisemthethweni sokungena bekungu-11: 44 enhlonhlweni futhi kuvulwa ngezinye izivunguvungu ezisasebenza ngemimoya enamandla edala amagagasi amakhulu nemvula enamandla eziQhingini zaseBalearic.
I-State Meteorological Agency isaqhubeka nokusebenza isexwayiso se-orange semvula nomoya eziqhingini zaseMallorca naseMenorca. Okubi kakhulu sekuphelile manje, kepha izimvula zisazokhipha amalitha ayi-100 ngemitha skwele ngamahora ayi-12 kuphela. Amagagasi anamandla azofinyelela kumagagasi aze afike kumamitha amane no-4 ukuphakama.
Yonke enye inhlonhlo inemvula ebuthakathaka futhi abasanaki. Yize kulindeleke isibhakabhaka esinamafu enyakatho yeGalicia, iCantabrian nasempumalanga yeCanary Islands.
Ngokuqondene nobusika buka-2016-2017, sizotholani? Yebo, sinezenzakalo eziningana zezinkanyezi ezizokwenzeka kulobu busika ezizohlala cishe izinsuku ezingama-88 namahora angama-23. Esibhakabhakeni sethu sasekuseni amaplanethi azodlondlobala UJupiter noSaturn lokho kusihlwa kuzogqamisa UVenus, uMars no-Uranus.
Njengoba sazi, ukuqala kobusika kusho ukuthi namuhla usuku olufushane kakhulu onyakeni. EMadrid ngokwesibonelo, usuku luzohlala isikhathi eside amahora angu-9 kuphela nemizuzu engu-17. Uma siyiqhathanisa nosuku olude kakhulu onyakeni ngoJuni odlule, usuku lwathatha amahora ayi-15 nemizuzu emi-3.
Sizophinde futhi sifiphazwe kulobu busika. Phakathi kukaFebhuwari 10 no-11 kuzoba nokusitheka kohlobo lwenyanga oluzovela eMelika, eYurophu, e-Afrika nase-Asia. Uma izimo zezulu ezifana nesembozo sefu zisivumela, kungahle kubonakale eSpain. Le Eclipse imayelana necala elingajwayelekile nelikhethekile elibizwa "Ukuhlwa okuphelele." Igama layo libangelwa ukuthi esiqongweni sayo yonke idiski yenyanga izofakwa ngaphakathi kwe-penumbra.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Samukela ubusika 2016-2017
I-NASA idala ividiyo ekhombisa isikhutha seplanethi